Burcad Shabaab oo sumeeyay ceelal ku yaala deegaanka Ceel baraf ee G/Sh/Dhexe!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Burcad Shabaab oo sumeeyay ceelal ku yaala deegaanka Ceel baraf ee G/Sh/Dhexe!!
Burcad Shabaab oo sumeeyay ceelal ku yaala deegaanka Ceel baraf ee G/Sh/Dhexe!!
Nov 05, 2016WARAR
Dadka deegaanka Ceel baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay iney ka war heleen maleeshiyada Al-shabaab xalay iney sumeeyeen Ceelashii ay Biyaha ka cabi jireen dadka halkaasi ku nool oo ka cabanaaya Arhaabiinta.
Dadka deegaanka ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in xalay saqdii dhexe maleeshiyaadkaasi ay sumeeyey ceelasha biyaha ee ku yaala deegaanka Ceel-baraf ee gobolka Sh/Dhexe, si ay u dhibaateeyaan dadka rayidka ah iyo sidoo kale xoolaha oo ceelashaasi ka biya caba.
Arintaan ayay dadka deegaanku ogaadeen kadib markii maleeshiyaad kale oo ka tirsan Al-shabaab ay dadka ku soo wargaliyeen in ceelasha la sumeeyey oo falkaasi ay ka dambeeyeen maleeshiyada Al-shabaab.
Taasi ayaana keentay in dadka deegaanku ay isku wargaliyaan isagana digaan in biyo laga cabo ceelasha maleeshiyaadka Al-shabaab ay sumeeyeen.
21-kii bishii aynu soo dhaafnay ee October ayaa maleeshiyada Al-shabaab waxa ay miinooyin ku qarxiyeen ilaa iyo labo ceel oo ku yaala isla deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Sh/dhexe, si dadka deegaanka iyo xooluhuba aaney biyo uga cabin.
Wadaao Maafiya Alshabaab ayaa waxay horey u gubeen Deegaanno fara badan oo kamid ah gobolka Galgaduud kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bud-bud, Galcad, iyo kuwa kale oo badan
Falkaan ayaa qeyb ka ah dhibaatooyinka xad dhaafka ah ee maleeshiyaadka Shabaab ku hayaan bulshada Soomaaliyeed ee abaarta hayso waxaana warar hoose sheegayaan in xoololeydaas ay bixidiideen Dhaqaalo xoolo ay rabeen Maafiya Ashabaab ah.
xigasho Idaacada Muqdisho
Previous PostWeriyeyaal lagu eedeeyey iney taageeraan Fatxullah Gulen oo xabsiga la dhigay maanta Daawo Sawiro!! Next PostAqalka Doorashada Hoose oo ka bilaabatay Garoowe iyo Xildhibaankii ugu horeeyay oo la doortay!!